Olu lolunye lawona manqaku aphambili osele uwabonile kwaye wonwabele kwi-HBO Spain | Iindaba zeGajethi
Olu lolunye lawona manqaku aphambili osele uwabonile kwaye wonwabele kwiHBO Spain
Izolo ukufika kuka HBO ukuya eSpain, into bonke abathandi bethotho kunye neemovie ekudala befuna. Kwaye ayisiyiyo ukuba sinomxholo omncinci onokukhetha kuwo, kodwa ungaze nakweliphi na iqonga lolu hlobo. Ngoku umzekelo ngoku sinokukhetha phakathi kweNetflix kunye neHBO, okanye hlala nabo bobabini ukonwabela ngokungenamida.
Ikhathalogu ye-HBO Spain yeyona ibanzi kakhulu kwaye sinokuzifumana silufumana kuthotho lweentsomi ekungafanelekanga ukuba siluphose kwaye ezinye zilungile ngoku, ukuze singalahlekani nazo. Ukuba awukangeni phakathi kwikhathalogu ye-HBO okwangoku, ungakhathazeki, njenge Kweli nqaku siza kukubonisa olona luhlu lubalaseleyo osele uzibona kwaye ulonwabele kwiHBO Spain.
1 Uthotho lwentsomi lwe-HBO Spain ongafanele uluphose
1.1 Amadoda Mad
1.4 Iimitha ezimbini phantsi komhlaba
1.5 Umtsalane oyinyaniso
2 Olona luhlu lukhoyo ngoku sinokubona kwi-HBO Spain
2.1 Imidlalo yeethrone
2.3 Ubusuku Boku
3 Kwaye ayisiyiyo yonke loo nto
Uthotho lwentsomi lwe-HBO Spain ongafanele uluphose
Apha ngezantsi sikubonisa olona ngcelele lwentsomi noludumileyo esinokuthi sonwabe kulo kwiHBO Spain;
I-AMC ngumvelisi kunye nomyili we Amadoda Mad kwaye i-HBO ibonelela kwikhathalogu yayo, yenye yezona ngcelele zinomtsalane nezithandwayo ezibonelelwa ngalo mzuzu. Kuyo singonwabela amaxesha asixhenxe ubugcisa bobudlelwane boluntu, sixela indlela eyayiyimini ngayo yonke imihla kwii-7s kwaye apho izinto kunye neziganeko zenzeka khona, kuyindalo leyo ngoku ithatha ingqalelo yethu.
Phambi kweNarcos, apho uxelelwa ngobomi bukaPablo Escobar, uninzi lwethu lwalusele lukwazi ukonwabela iLos Sopranos, apho kubaliswa ngobomi be-mobster, nazo zonke iingxaki zomsebenzi wakhe, kodwa kufuneka ajongane neengxaki zemihla ngemihla ajamelana nazo umntu yonke imihla.
Ngaphandle kwamathandabuzo, iLos Sopranos yenye yoluhlu olubalulekileyo ekufuneka wonke umntu abone kwi-HBO Spain.
U-Barack Obama, u-Mongameli wase-United States, uthe ngaphezulu kwesihlandlo esinye esithi i-The Wire yeyona nto ayithandayo kwaye uninzi lubize elona chungechunge lubalaseleyo embalini. Asisayi kuba ngabo bachasa nabani na, kwaye siza kuthi ngothotho lwamapolisa, ekufuneka ulilinganise kwaye ubone ukuba uyabelana na noluvo no-Obama okanye, ngokuchaseneyo, uzibeka phambi kwabagxeki nabo zikhona.
Kwi-HBO Spain sele ufumanekile ukuba ubukele kwaye wonwabele amaxesha ama-5 e-The Wire ukuba uyawathanda, aya kuhlala ixesha elifutshane.
Iimitha ezimbini phantsi komhlaba
Usapho olungasebenziyo olusindayo ngenxa yomzi womngcwabo zizinto ezoneleyo zokukhokelela kuthotho olukhulu lukamabonwakude njenge Iimitha ezimbini phantsi komhlaba, ekwabalwa njengenye yezona ziphelo zilungileyo, ngokuqinisekileyo asizukutyhila kuwe.
Ewe ndinokukuxelela ukuba ndicinga ukuba kunqabile ukuba ndilonwabele uthotho kakhulu apho luxelelwa khona njengoko lukhona, indlela esiphila nesifa ngayo.
Amaxesha amabini onyaka, amabali amabini ahlukeneyo, ane UMateyu McConaughey ukukhukhumala okwamphakamisayo njengomnye wabadlali ababalaseleyo eHollywood. Kula maxesha mabini asele ekho kwi-HBO Spain ungonwabela kwaye uhlalutye obona bomi bungekho nzulu eUnited States.
Olona luhlu lukhoyo ngoku sinokubona kwi-HBO Spain
Ngoku lixesha lokuba ndikubonise ezinye zezona ngcelele zangoku zibalaseleyo sinokubona, ukusukela izolo, kwi-HBO Spain;
Ingoma yoMkhenkce kunye noMlilo yenye yezona mpu melelo zincwadi zempumelelo kwihlabathi nalapho i-HBO isekwe khona ukuyila Umdlalo weTrone. Okwangoku amaxesha ama-6 ayafumaneka apho sinokonwabela ibali elenziwe George RR Martin, ethatha ukupapashwa kweencwadi ezishiyekileyo, kwaye ibeka abadali be-HBO engxakini enkulu.
Ukuba uthanda iintsomi, iidragons kunye nokuzithuthela kwilizwe elahlukileyo, ukuba luthotho, okwangoku ngaphandle kokuphela, kufanelekile kuwe.
I-HBO iyaqhubeka nokubheja isigqibo kumxholo wayo, kwaye enye yeendlela zayo zokubheja zakutshanje lolu ngcelele, olunelungelo Westworld, ethi ngexesha layo lokuqala yoyisa umkhosi wabalandeli.
Ubukrelekrele bokwenziwa ngumntu ophambili kwimveliso Kwaye yintoni esenza sizibuze ngamaxesha amaninzi ukuba isinika ntoni kwaye isiphembelela njani kubomi bethu bemihla ngemihla. Ngaphandle kwamathandabuzo olunye lothotho olubalulekileyo lomzuzu.
Olunye uthotho olubalulekileyo lwe-HBO Spain Ubusuku Boku, ethe yothusa inani elikhulu labantu ngexesha layo lokuqala, kwaye yenza abaninzi bafuna ukufika kwesavenge sesibini.
Luthotho lwamapolisa apho icala elinye, elisebenza kakuhle kakhulu, linikezelwa kuthi kwii-engile ezininzi nakwimbono yabalinganiswa abohlukeneyo. Kweli xesha lokuqala kukho ukugxekwa kwenkqubo yezomthetho neyentolongo yase-United States, ethi ngokoluvo lwam uthobekile akufuneki uphoswe nakweyiphi na imeko.
Kwaye ayisiyiyo yonke loo nto
Ezi sikubonise zona zezinye zezona ngcelele zibalaseleyo esinokuzibona kwaye sizonwabele okwangoku kwi-HBO Spain, kodwa ikhathalogu ayipheleli kubo kunye noluhlu, iimuvi kunye nezinye iintlobo zomxholo zinkulu kakhulu. Ungabona ezinye ezifana Igumbi leendaba, i-Bang yaBazalwane, i-Super Girl, i-Boardwalk empire, amantombazana, i-Roma, isondo eNew York okanye eSillicon Valey.
I-HBO Spain sele ingene kubomi bethu kwaye ukusukela izolo baninzi kuthi abonwabela ikhathalogu yayo enkulu, esiza kwenza kuyo iingcebiso kwiintsuku nakwiiveki ezizayo.
Luluphi uthotho olusuka kwikhathalogu ebanzi ye-HBO Spain olucebisayo?. Sitshele iingcebiso zakho kwisithuba esibekelwe ukuphawula kule post okanye ngenye yeenethiwekhi zentlalo apho sikhona kwaye sijonge phambili ekuthetheni ngothotho kunye neemovie ezivela kwi-HBO Spain.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Olu lolunye lawona manqaku aphambili osele uwabonile kwaye wonwabele kwiHBO Spain
IAmazon isinika isaphulelo esinomdla se- € 30 kwii-smartphones ezihlaziyiweyo